झनै बोल्ड अवतारमा सोनाक्षी – Khabar Silo
झनै बोल्ड अवतारमा सोनाक्षी
मुम्बई – बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा फरक लुकमा देखिएकी छन् । सोनाक्षीले हालै गराएको फोटो सुटमा फरक अवतारमा देखिएकी हुन् ।फोटो सुट उनले ‘खुस वेडिङ’ म्यागजिङका लागि गराएकी हुन् । यी तस्बिरका साथ उनी म्यागजिनको कभर पेजमा छाउने छिन् ।
तस्बिरमा सोनाक्षी आकर्षक लुकमा देखिएकी छन् । उनले तस्बिर सुट समुन्द्रको किनारमा पनि गराएकी छन् । सुट गरिएको केही तस्बिरमा उनले गोल्डेन कलर र ब्राइडल लेहेङ्गा समेत लगाएकी छिन् ।सुट गरिएको तस्बिर उनले आफ्नो इस्टाग्रामबाट पनि शेयर गरेकी छन् । जुन निकै आकर्षक समेत रहेको छ । सोनाक्षीका इस्टागममा ९।९ मिलिनियन फलोअर्स छन् ।
‘अनलक्की’ मिरुनाको ‘लक्की’ करियर
नायिका मिरुना मगरलाई नेपाली चलचित्रकी एक ‘अनलक्की’ नायिका मानिन्छ । ‘लालपुर्जा’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी उनका ‘रोज’ र ‘साईनो’ रिलिज भईसकेका छन भने ‘च च हुइँ’ प्रदर्शनको पर्खाईंमा छ । उनका रिलिज भईसकेका तिनै चलचित्रले उनलाई हिटको ट्याग दिन सकेन बरु उनको फ्लपको सङ्ख्या मात्रै बढायो । तर, पनि उनमा पक्कै केही गुनासो छैन होला […]
प्रेम गीत ३ को पहिलो गीतनै ट्रेनिङ १ मा आउदा यस्तो सम्म प्रतिक्रिया आयो कमेन्टमा(हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं । प्रदर्शनीको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘प्रेम गीत ३’ को ‘हात्ती ढुङ्गामा’ गीत युट्युबको ट्रन्डिङमा पहिलो नम्बरमा आएको छ । निर्माण टिमले चलचित्रको प्रमोसनका रूपमा पहिलो गीत मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । रिलिजको २ दिनभित्रै सो गीत ट्रेन्डिङको पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएको हो । मेलिना राई र सागर आलेको स्वर रहेको गीतमा हर्कबहादुर साउदको […]
सुन्दर र आकर्षक देखिन के गर्छन बलिउडका अभिनेत्रीहरु ? यस्ता छन् सुत्रहरु !!
Posted on April 16, 2021 Author khabar silo
अहिले कोरोनाको कारण मेकअप गर्ने, पार्लर धाउने अनुकुल वातावरण छैन । त्यसो त धेरैजसो अवस्थामा घरभित्र बस्नुपर्ने, हिँडडुल गर्दा मास्क लगाउनुपर्ने भएकाले पनि मेकअप गर्नैपर्ने बाध्यता नहोला । यद्यपि यस्तो अवस्थामा पनि कसरी आफ्नो अनुहार, कपाल, छाला, नङ अर्थात समग्र शरीरको सौन्दर्य कायम राख्ने ? कसरी आफुलाई फिट एन्ड फाइन राख्ने ? सरोकारका विषय हुन् […]
दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण सुरु (भिडियोसहित)